Seychelles Islands beckons long-term remote workers | Seychelles travel news
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Jasiiradaha Seychelles waxay xushaan shaqaale fog oo fog
Jasiiradaha Seychelles waxay xushaan shaqaale fog oo fog
Jasiiradaha Seychelles waxay ku martiqaadayaan booqdayaasha adduunka inay deggaan geeska yar ee janada iyagoo u maraya Barnaamijkooda Dib u gurashada - isku darka shaqada iyo waqtiga firaaqada ee kulaylaha.
Xafiiska gurigu wuxuu u noqday wax caadi ah shaqaalaha cusub ee adduunka.
Tan iyo markii uu faafay COVID-19, damacii ahaa in laga baxsado waxyaabaha aan caadiga ahayn oo laga shaqeeyo meel janno ah ayaa kacday.
Barnaamijka cusub ee Seychelles wuxuu u furan yahay dhammaan dadka haysta baasaboorka saxda ah wuxuuna koobayaa adeegyo kala duwan oo taageeraya shaqada fog.
Barnaamijku wuxuu kuqanciyaa shaqaalaha fogfog dalab aan ladiidi karin oo ah inay u wareejiyaan xafiiskooda jasiiradda si ay uga baxsadaan dhibaatooyinka nolosha caadiga ah, rabitaankaas oo cirka isku shareeray tan iyo aafadii.
Soo-booqdeyaashu waxay awood u yeelan doonaan inay ku noolaadaan kana shaqeeyaan dhulka loogu talagalay kuleylka ugu badnaan hal sano. Waa in la ogaadaa in kaliya booqdayaasha ganacsigooda iyo ilaha dakhligoodu ka baxsan yahay Seychelles, ay u qalmi doonaan barnaamijka.